समाजबाटै हिंसा उन्मुलनका लागि दबाब सृजना गरौं 2078/10/24 सप्तरीमा महिला हिंसाको एउटा रुप पुनः देखिएको छ । कुनै पनि बहानामा ज्यानै मार्ने कार्य निन्दनीय हो । महिला हिंसा न्युनिकरणका लागि सरोकारवाला निकायले निकै प्रयास गरेको छ र गर्दै पनि छ । तर, त्यसले कुनै मूर्त रुप लिन सकिरहेको देखिन्न् । कुनै पनि हिंसा र त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नु सामाजिक तथा कानुनी अपराध हो । तर, मानिसले आवेशमा आएर त्यस्तो घटना गर्न पुग्छन् । .... विस्तृत
प्रदेशको नाम र राजधानीका लागि दलहरु एकमत हुनु आवश्यक 2078/09/12 हाल नेपालको सात प्रदेश मध्ये पाँच प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी समेत तोकिसकेको छ । तर, प्रदेश १ र प्रदेश २ को नामाकरण र स्थायी राजधानीको अझ टुङ्गो लाग्न सकिरहेकोे छैन । यता प्रदेश २ को नामाकरण र स्थायी राजधानीका लागि एक पटक प्रदेशसभाबाट प्रस्ताव विफल भइसकेको अवस्थामा पुनः सोही सभामा दोश्रो पटक प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।..... विस्तृत
स्थानिय सरकारको अनुभूती दिलाऊ 2078/09/06 विगत तीन दिनदेखी चिसो बढ्दै गएको छ । यता चिसो बढेसँगै पुनः कोरोनाको त्रास समेत बढ्दै गएको छ । एक त चिसो त्यसमा पनि कोरोनाको त्रासले गर्दा जनजिवन प्रभावित भएको छ । चिसोका कारण गरिब, निमुख्खा जनताहरु न्यानो कपडाको पखाईमा छन् । उनीहरुका लागि स्थानिय तहले न्यानो कपडा तथा चिसोबाट बच्नका लागि अन्य प्रबन्ध मिलाउने आश्वासन दिनुका साथै बजेट समेत छुट्याएका छन् । तर, अहिलेसम्म स्थानिय तह आफ्नो प्रतिबद्धताप्रति बेखबर छन् भने बजेटलाई कुन प्रकारले प्रयोगमा ल्याउने बारे ध्यान दिनसकेका छैनन् । .... विस्तृत
विपद्बाट जुद्धन पूर्वतयारी आवश्यक 2078/09/02 गरिब, निमुख्खा जनतालाई चिसोबाट बचाउनका लागि स्थानिय तहहरुले पूर्व तयारीमा जुट्नु पर्ने बेला आएको छ । विगतका वर्षहरुमा चिसोका कारण दर्जनौं जनताले ज्यान गुमाउने परेको थियो । चिसो बढ्दै जाँदा सितलहरका कारण गरिब, निमुख्खा जनताहरुलाई न्यानो कपडाको अभाव महसुस हुन्छ । ती गरिब जनतालाई दुई छाक टार्न पनि धौं धौं परेको अवस्थामा स्थानिय तहले उनीहरुप्रति ध्यान पु¥याउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यसका लागि अहिले देखी नै उनीहरुका लागि न्यानो कपडा तथा आगो ताप्न दाउराको प्रबन्ध मिलाउनका लागि पूर्व तयारी आति आवश्यक छ । ..... विस्तृत
व्यापारीहरुको अपेक्षालाई परिणाममूखी बनाउनु नयाँ कार्यसमितिको दायित्व 2078/08/05 उद्योग बाणिज्य संघ सप्तरीले नयाँ नेतृत्व पाएको छ । त्यो पनि पूर्ण बहुमतका साथ । १४ सदस्यीय कार्यसमितिमध्ये १२ पदाधिकारी एउटै समूहका निर्वाचित भएका छन् । निवर्तमान कार्यसमितिले आफ्नो तीन वर्षको कार्यकाललाई लम्ब्याएर सात वर्ष पु¥याएको थियो । सात वर्षे अवधीको समितिमा रहेका उपाध्यक्ष शंकर दासले आफ्नै नेतृत्वमा निर्वाचन लडे । तर उनी पराजित हुन पुगे । पुराना उद्योगि लालु प्रसाद अग्रवालले अत्याधिक मतबाट निर्वाचित भए । नवनिर्वाचित कार्यसमितिमा पूर्ण बहुमत रहेको छ । सो कार्यसमितिमा अधिकांश यूवा उद्योगि व्यापारीहरु नै रहेका छन् । .... विस्तृत
लौकाको मुल्य ३ सय ५० ! 2078/07/22 चाड पर्व अन्तरगत अन्तिम पर्व छठ पर्वको पूर्वसन्ध्यामा अहिले सप्तरीमा तरकारीको मुल्यमा अधिक्तम बृद्धि भएको छ । छठ पर्व अन्तरगत नहाई खाईको दिन महत्वपूर्ण मानिने लौकाको मुल्य जिल्लामा कहिले नसुनेको २ देखी ३ सय ५० प्रति गोटा रहेको छ । अन्य दिन लौकाको मुल्य सामान्यता ५० देखी १ सय सम्म रहेकोमा एक्कासी बृद्धि भएपछि उपभोक्ताहरु चकित भएका छन् । .... विस्तृत
वर्षमा एक चोटी गर्ने काम दिनहुँ गर्ने बानी बसालौं 2078/07/14 हरेक वर्ष चाड पर्व नजिकिदै जाँदा विभिन्न स्थानको सरसफाइदेखी सार्वजनिक स्थानमा रहेको बिजुली बत्तिको मर्मत गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखि गर्ने गरिन्छ । विशेष गरि यो कार्य दशैं र तिहारको आगमनसँगै गर्ने गरिन्छ । वर्षको बाँकी रहेको एघार महिना त्यस्ता कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको देखिन्न् ।.... विस्तृत
तरकारीमा समेत मूल्य बृद्धि हुँदा अनुगमन समिति मौन 2078/07/14 चावपर्वको आगमनसँगै अहिले राजविराजमा दैनिक उपभोग्य बस्तुसँगै तरकारीको मुल्य समेत आकाशिएको छ । दशैं अगाडी ती बस्तुहरुको मुल्यमा थारै बृद्धि भएपनि अहिले तिहारको आगमनसँगै मुल्य अकाशिएको हो । दैनिक उपभोग्य बस्तु चामल, दाल, खाने तेल लगायत अन्य बस्तुहरुमा मुल्य अत्याधिक बृद्धि भएको छ । केही दिनअगाडी सम्म सामान्य मुल्य बृद्धि भएपनि अहिले हवात मुल्य बृद्धि भएपछि उपभोक्ताहरु मारमा परेका छन् । .... विस्तृत
सीमानाकामा सवारीसाधनमा रोकप्रति ध्यान पुगोस् 2078/06/23 भारतीय भक्तजनहरु सप्तरीस्थित छिन्नमस्ता मन्दिर दर्शनका लागि नआउँदा यस पटकको दशैंमा पनि मन्दिर परिसर विगतको दुई वर्ष झै सुनसान देखिएको छ । कोरोना महामारीका कारण झण्डै डेढ वर्षदेखी भारत नेपाल सीमा बन्द रहेको अवस्थामा एक हप्ता अघि मात्र नेपाल सरकारले सीमानाकामा सवारीसाधन आवतजावतका लागि अनुमति दिएको छ ।.... विस्तृत
सडकको अवस्थाप्रति कीन सबै मौन ! 2078/06/17 राजविराजमा अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा सडकको भएको छ । नगरपालिका क्षेत्र भित्रका अधिकांश सडकको हाल बेहाल भएको छ । कुनै पनि सडकमा निर्धक्क रुपमा हिडडुल गर्न सक्ने अवस्था छैन् । सबै सडक वर्षाका कारण हिलाम्मे बनेको छ । यति मात्र नभएर सडकमा भएको खाडलखुडलले बटुवालाई झनै समस्यामा पारेको छ ।... विस्तृत
महिलाहरुको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार भएन 2078/05/21 ग्रामिण भेगका महिलाहरुको स्वास्थ्य अवस्था अहिले पनि सन्तोषजन देखिएको छैन् । उनीहरुको स्वास्थ्य स्थितिमा केही सुधार देखिए पनि सन्तोषजनक छैन् । अहिले पनि ग्रामीण भेगमा महिलाहरुको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अवस्था खासै सुधारोन्मुख छैन् । महिलालाई अहिले पनि सन्तान उत्पादन गर्ने मेशिनका रुपमा हेर्ने हाम्रा संकीर्ण आँखाहरु यथावत नै छन् ।.... विस्तृत
वनजंगल मासिदैप्रति सबै गम्भिर बनौं 2078/05/03 नेपाल वन जंगलले ढाकिएको राष्ट्र हो । एउटा कृषि प्रधान देश हुनुका साथै विश्वमै जलश्रोतको दोश्रो धनी पनि हो नेपाल । यो वाक्य अब किताबमै सीमित हुन पुगेको छ । बालबालिकाहरुको पाठ्यक्रममा यो वाक्यलाई अझै प्रष्ट्याइएको छ । तर, अहिले यसको यतार्थ बेग्लै छ । यो वाक्य सुन्दा जति गर्व गर्ने खालको छ, त्यसको यथार्थ उत्तिकै कष्टकर छ । .... विस्तृत
स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरि आ–आफ्नो कार्य गर्नु आवश्यक 2078/03/16 कोरोना महामारीका कारण विगत दुई महिनादेखी ठप्प रहेको जनजिवन पुनः बिस्तारै गति लिन खोजिरहेको छ । यद्दपी महामारीको जोखिम अहिले पनि कायमै रहेको छ । तर, दुई महिनादेखी मुलुक नै ठप्प रहेकाले मानिसहरुको जनजिवन सामान्यतर्फ उन्मुख गर्ने उद्देश्यले लकडाउनलाई केही खुकुलो पारिएको छ ।.... विस्तृत
नयाँ वर्षमा कोरोनासँग मनोवल उच्च राखेर लडौं 2077/12/31 समयचक्र सँगै आजदेखि पुन: हामी नयाँ बर्षमा प्रवेश गरेका छौं । बिक्रम सम्वत् २०७८ आज प्रवेश गरिसकेको छ । गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण नयाँ वर्ष खल्लो भएको थियो । यद्दपी यस वर्षको सुरुवात सँगै कोरोना पुन: नयाँ रुपका साथ देखिएको छ । .... विस्तृत
विपद् न्युनिकरणका लागि जनचेतना आवश्यक 2077/12/06 प्राकृतिक विपदका घटनाहरुबाट सप्तरी हरेक वर्ष प्रभावित हुने गरेको छ । प्राकृतिक विपद भन्नाले आगलागि, बाढी, चिसो लगायत पर्दछ । यी मध्ये सप्तरीमा सबैभन्दा बढी बाढी र त्यसपछि आगलागिका घटनाहरु मानिसहरु बढी प्रभावित हुने गर्दछ । फागुनदेखी बैशाख महिनासम्म हावाहुरी आउने मौसम रहेकोले यस अवधीमा आगलागिका घटना बढी मात्रामा हेन गर्दछ । यसप्रति सबै जनता सचेत रहनु पर्ने आवश्यक छ । .... विस्तृत
भारोत्तोलन खेलप्रति ध्यान पुगोस् 2077/12/01 सप्तरीमा खेलकुद गतिविधी न्युन भएको बेला राष्ट्रिय स्तरको भारोत्तोल खेलको आयोजनाले खेलप्रेमीहरु केही मात्रामा हर्षित भएका छन् । विगतका वर्षहरुमा खेलकुद गतिविधी अन्यन्त कम मात्रा भएको बेला यस वर्षको अन्तिम समयमा राष्ट्रिय स्तरको भारोत्तोलन प्रतियोगिताको आयोजनाले जिल्लावासीहरुको ध्यानाकर्षण भएको छ । .... विस्तृत